उपेन्द्र यादव अध्यक्ष, भट्टराई र यादवले चुनाव अघिनै पार्टी एकीकरण गर्ने
आईतबार, मंसिर २४, २०७४
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच चुनावअघि एकीकरण हुने भएको छ । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
स्रोतका अनुसार नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. भट्टराईले फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवलाई अध्यक्ष स्वीकार गरिसकेका छन्, तर पार्टीलाई कुन प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन ३, २०७४ ०५:०१:२३